About Us - Radiant Lighting Teknolojia Co., Ltd.
Miramirana Lighting manana ny orinasa miorina ao Suzhou tanàna izay tokony ho 2hrs mitondra fiara fotoana Shanghai. Niorina tamin'ny taona 2005, Radiant dia vondrona avo-teknolojia orinasa misahana ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny, ny famokarana, ny varotra sy ny fanompoana ao matihanina downlight nitondra vokatra.
Amin'ny 30 R & D mpiasa, Radiant customizes ho an'ny tsena. Vokatra rehetra nivarotra ny Radiant dia fitaovana nisokatra vokatra sy manana ny zava-baovao koa ny vidiny. Miramirana dia afaka hanatitra ny anankiray nijanona asa fanompoana avy amin'ny vokatra famolavolana, tooling, fonosana famolavolana sy ny famoronana lahatsary.
Factory manarona ny faritra ny 9000 metatra toradroa ary mihoatra ny 180 manana tehina. Afaka mba hanafaka ampahany tamin'ny 20 andro, ary tsy hentitra loatra ho an'ny kely sy ny baiko maika lahateny.
Miramirana maka andraikitra sy hanao ny tsara indrindra hanaraka azy. Factory hetsika manaraka tsara ny fitsipi-ISO9001, ISO4001 sy BSCI. Ary 6S fitantanana dia tsara tanterahina ao amin'ny orinasa. Clear, milamina ary mba fahatsapana no azontsika foana ny hamonjy ireo izay efa nitsidika anay.
Mino isika fa ny olona ny fon'ny Radiant Jiro ary fa manana talenta, foto-drafitrasa sy ny fanoloran-tenany hanompo ny mpanjifa ny fenitra ambony indrindra. Izahay handika ny fanajana ny zo, ny fanavaozana sy ny famoronana.
Tongasoa eto amin'ny nanontany hamangy Radiant Jiro.